स्याउको तौल बराबरको शिशू जन्मिएपछि… - Prateek Nepal
एजेन्सी / अमेरीकाको एक अस्पतालमा २ सय ४५ ग्रामका शिशू जन्मिएका छन् । शिशूको नाम उनका अभिभावकले सेबी राखेका छन् ।
शिशू जन्मदा उनको तौल एउटा स्याउको तौल बराबरको भएकाले शिशूका बाबुआमाले नाम नै सेबी राखेका हुन् । डिसेम्बर २०१८ मा जन्मिएका उनी २३ हप्ता तीन दिनमा जन्मिएका हुन् ।
चिकित्सकले जन्मिएको केही घण्टामै मृ’त्यु हुनसक्ने भनिएको शिशूलाई स्वास्थ्य अवस्था राम्रो भएपछि क्यालिफोर्नीयाको सो अस्पतालले डिस्चार्ज गरिदिएको छ । स्याउ जति नै तौल भएका शिशू स्वास्थ्य अवस्थामा अस्पतालबाट फर्कनु आश्चर्यको कुरा भएको सेबीको हेरचाह गर्ने नर्सले बताएकी छन् ।
द टिनिएस्ट बेबी रजिस्ट्रीले सेबी संसारकै सबैभन्दा कम तौल भएको नवजात शिशू घोषित गरेको छ ।
यसअघि सन् २०१५ मा जर्मनीको एक नवजात शिशू २ सय ५२ ग्रामको जन्मिएर संसारकै सबैभन्दा कम तौल भएका शिशूको रकर्ड बनाएका थिए । अमेरीकाका सेबीले जर्मनको ती शिशूको रेकर्डलाई पनि तोडेका छन् ।
प्रचण्ड–नेपालले भुइँको टिप्न खोज्दा खल्तीको पनि खसाले !
संसद वि’घटनको निर्णय सुटुक्क फिर्ता !
लोडसेडिङ अन्त्यको श्रेय कुलमानलाई दिन मिल्दैन भन्दै मुकेश काफ्ले मिडियामा [भिडियो सहित]